Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CHECKDB "Nandritra ny fanavaozana ny fisoratana anarana anaty logiciel 'xxxx' dia nisy lesoka nitranga teo amin'ny ID record log.
Home Products DataNumen SQL Recovery Fahadisoana CHECKDB: Nandritra ny fanavaozana ny fiasa iray miorina amin'ny Database 'xxxx', nisy lesoka nitranga tao amin'ny Id Record Log
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny lesoka CheckDB "Nandritra ny fanavaozana ny fiasa iray voatanisa ao amin'ny Database 'xxxx', nisy lesoka teo amin'ny Id Log Record."
Msg 824, haavo 24, fanjakana 2, andalana 2
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O mifototra amin'ny lozisialy: pejy tsy mety (andrasana 1: 143; tena 0: 9). Nitranga izany nandritra ny famakiana pejy (1: 143) tao amin'ny base ID 39 amin'ny offset 0x0000000011e000 ao amin'ny rakitra 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Hafatra fanampiny ao amin'ny SQL Server log error na lozisialy momba ny hetsika dia mety hanome antsipiriany bebe kokoa. Ity dia fepetra goavambe diso izay mandrahona ny tsy fivadihan'ny tahiry ary tsy maintsy ahitsy eo noho eo. Fenoy ny fanaraha-maso tsy fitoviana tahiry (DBCC CHECKDB). Ity lesoka ity dia mety miteraka antony maro; raha mila fanazavana fanampiny, jereo SQL Server Boky an-tserasera.
Msg 3313, haavo 21, fanjakana 1, andalana 2
Nandritra ny famerenana indray ny fisoratana anarana voasoratra ao anaty tahiry 'Error1' dia nisy lesoka nitranga teo amin'ny log record ID (135: 752: 2). Matetika, ny tsy fahombiazana manokana dia efa voasoratra ho hadisoana amin'ny serivisy Windows Event Log. Avereno amin'ny laoniny feno ny tahiry, na amboary ny tahiry.
Msg 3414, haavo 21, fanjakana 1, andalana 2
Nisy lesoka nitranga nandritra ny fanarenana, nanakana ny tahiry 'Error1' (39: 0) tsy ho restarTing. Diagnostika ny lesoka fanarenana ary amboary, na avereno amin'ny backup tsara fantatra. Raha tsy misy fanitsiana na antenaina ny lesoka dia mifandraisa amin'ny Support Technical.
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O mifototra amin'ny lozisialy: pejy tsy mety (andrasana 1: 160; tena 0:41). Nitranga izany nandritra ny famakiana pejy (1: 160) tao amin'ny kaonty ID 39 ao amin'ny offset 0x00000000140000 ao amin'ny rakitra 'C: Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL12.SQL2014MSSQLDATAError1.mdf '. Hafatra fanampiny ao amin'ny SQL Server log error na lozisialy momba ny hetsika dia mety hanome antsipiriany bebe kokoa. Ity dia fepetra goavambe diso izay mandrahona ny tsy fivadihan'ny tahiry ary tsy maintsy ahitsy eo noho eo. Fenoy ny fanaraha-maso tsy fitoviana tahiry (DBCC CHECKDB). Ity lesoka ity dia mety miteraka antony maro; raha mila fanazavana fanampiny, jereo SQL Server Boky an-tserasera.
Msg 824, haavo 24, fanjakana 2, andalana 4
Msg 3313 manondro fandidiana hazo tsy azo tanterahina.
Rehefa tsy afaka manao opération logged ny CHECKDB dia hitatitra ny hafatra diso Msg 3313 ary manandrama manamboatra ny lesoka. Raha tsy afaka manamboatra ny lesoka izy dia tsy mahomby ny fanarenana ary hitarika fahadisoana bebe kokoa, toy ny Msg 3414 sy Msg 824.
Ohatra ny rakitra MDF simba izay hiteraka ny Msg 3313 fahadisoana:
SQL Server 2014 Hadisoana9.mdf Error9_fixed.mdf